Izindaba - Ziyini izinzuzo zokusebenzisa izinto ezahlukahlukene zemishini emikhulu
Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zobuchwepheshe zamakhasimende ayo ngesikhathi sokusebenza kwemishini emikhulu, umsebenzi wokusebenzela kufanele ubekwe kahle endaweni ehleliwe kuthuluzi lomshini ngesikhathi sokusetshenziswa. Ukuze ugweme okokusebenza ngesikhathi senqubo yokuchofoza. Lapho ukufuduka kuthintwa amandla angaphandle njengokuqothula amandla adonsela phansi, amandla okuqinisa kufanele asetshenziselwe ukubamba umsebenzi wokugcina ukuze kugcinwe ukuma kwawo kungashintshi. Ziyini izinzuzo zokusebenzisa izinto ezahlukahlukene zemishini emikhulu?
Izinzuzo zokusebenzisa i-Q235A (i-A3 steel) yemishini emikhulu
Inzuzo enkulu yokusebenza kwemishini emikhulu ukuthi ine-plasticity ephezulu, ukuqina nokusebenza kwe-welding ezingeni elithile. Umkhiqizo wonke unokusebenza okuthile kokunyathela nokusebenza okubandayo kokugoba. Isetshenziselwa ikakhulukazi izidingo lapho isetshenziswa. Ezingxenyeni ezisezingeni eliphansi zemishini kanye nezingxenye zesakhiwo eziphothene, njengezinduku zokubopha, izinduku zokuxhuma, izikhonkwane, imiphini, izikulufo, amantongomane, abakaki, izisekelo, njll.
Izinzuzo zokusebenzisa i-40Cr ngemishini emikhulu
Ukusetshenziswa kwemishini emikhulu kuzoba nezindawo ezinhle kakhulu zomshini, ukuqina komthelela wokushisa okuphansi, ukuzwela okuphansi kokuqina kanye nobulukhuni obuhle ngezinga elithile ngemuva kokucima nokushisa. Amandla aphezulu angatholakala lapho selehlile uwoyela, futhi izingxenye zithambekele ekuqhekekeni lapho zipholile ngamanzi. Ngemuva kokushisa noma ukucima nokushisa, i-machinability ilungile, kepha i-weldability ayiyinhle futhi imifantu kulula ukuyenzeka.
Lapho umshini usetshenziswa, usetshenziselwa ikakhulukazi izingxenye ezisheshayo ezihamba ngomshini enqubeni yokukhiqiza ngemuva kokucima nokushisa, njengamagiya amathuluzi omshini, imiphini, izibungu, njll. esetshenziselwa ukwenza izingxenye ngobulukhuni obuphakeme nokugqoka ukumelana, njengamagiya, imiphini, okokuphotha, ama-crankshafts, okokuphotha, imikhono, izikhonkwane, izinduku zokuxhuma, njll.
Ngemuva kokucima nokushisa ekushiseni okuphakathi, kusetshenziselwa ukwenza izingxenye ezisindayo, ezinesivinini esiphakathi ezihamba ngomshini, njengama-rotor wepompo kawoyela, izilayida, amagiya, okokuphotha, njll. Ngemuva kokucima nokushisa okushisa okuphansi, kuyasetshenziselwa yenza izinto ezisindayo, ezinomthelela ophansi, izingxenye zemishini ezingagqoki, ezinjengezibungu, okokuphotha, nemiphini. Esizeni se-carbonitriding, izingxenye zokudlulisa ezinobukhulu obukhulu nobunzima obuphezulu bokushisa okuphansi, njenge-shafts, amagiya, njll.
Ubuhle bokusebenzisa ama-45 # wemishini emikhulu
I-45 # iyinsimbi esezingeni eliphakeme yokwakheka kwekhabhoni, futhi njengamanje iyinsimbi esetshenziswa kakhulu ecisha umoya nekhabhoni.
Ngesikhathi sokusebenza, kuzoba nezindawo ezinhle kakhulu zomshini. Inobulukhuni obuphansi ngesikhathi sokusetshenziswa futhi ithambekele ekuqhekekeni ngesikhathi sokucinywa kwamanzi. Izingxenye ezibunjiwe zidinga ukufudunyezwa ngaphambi kokushisela bese zithunyelwa ngemuva kokushisela.
Ikakhulu esetshenziselwa: yokukhiqiza ephezulu amandla mechanical izingxenye ezinyakazayo, ezifana impellers, pistons, imiphini, amagiya, Racks, izikelemu, njll